छैन जनशक्ति- नाडा अटो सो - २०१९ - कान्तिपुर समाचार
भाद्र १०, २०७६ होम कार्की
बाँच्नु त पर्‍यो । तर गर्ने के ? मामाका ठुलो छोरा माइक्रो बसमा सहचालक थिए । उनैले राजुलाई बाटो देखाइदिए, ‘अहिले पैसा कमाउनु छैन । बिहान बेलुकाको छाक टार्न मजस्तै खलासी बने भइहाल्यो ।’
मामाका छोराले दुई दिनमै माइक्रो खोजिदिए । माइक्रो चढेको दिन तलब निर्धारण भएन । बिहान–बेलुका ड्राइभरसँगै खान पाइन्थ्यो । दिनभर सय/५० झ्याप हान्न पाइन्थ्यो । झन्डै ५ वर्ष जिन्दगी यही रेखामा दौडियो । यसबीचमा उनले माइक्रोका धेरै मेसिनेरी पाटपुर्जाबारे सूचना लिइसकेका थिए । गाडी स्टार्ट गर्न सिके । पार्किङबाट माइक्रोलाई बाहिर निकाल्न सिके । बिस्तारै सडकमा गाडी चलाउन थाले । १९ वर्षमै उनले घूस खुवाएर लाइसेन्स निकाले । ‘मेरो गुरुजीले चिनेका साथीलाई ३० हजार रुपैयाँ दिएँ । उनैले लाइसेन्स ल्याइदिए,’ उनले भने । त्यस उनी खलासीबाट ड्राइभर भए ।
राजु १० वर्षदेखि काठमाडौंमा गाडी कुदाइरहेका छन् । ‘भगवान्को कानमा नपरोस् । आजको दिनसम्म गाडी कतै ठोकिएको छैन । कसैलाई हानेको छैन । ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा परिएको छैन,’ रत्नपार्कमा भेटिएका उनी भन्दै थिए, ‘एउटा गाउँले केटो आज काठमाडौंमा घुमेर वसेको छ ।’
यातायात क्षेत्रमा ठूलो जनशक्ति कार्यरत छन् । श्रम सर्वेक्षण– २०७५ अनुसार रोजगार सिर्जना हुने ५ औ क्षेत्रभित्र यातायात पर्छ । नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अनुमानमा झन्डै ११ लाख जना चालक छन् । श्रम सर्वेक्षणले भने यातायात क्षेत्रमा मात्रै काम गर्ने श्रमिकको सख्या छुट्याएको छैन । यातायात, भण्डार, मोटर बनाउनेलगायत क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकको सख्या झन्डै १५ लाख ६२ हजार छन् ।
खै तालिम ?
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीम ज्वालाका अनुसार बजारको मागअनुसार दक्ष सवारी श्रमिक उत्पादन गर्न तालिम दिने निकाय नै छैन । ‘हामी सबै खलासीबाट ड्राइभर भएर बजारमा आएका हौं,’ उनले भने, ‘यति ठूलो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन व्यावसायिक तालिम दिने संस्था छैनन् ।’ यातायात व्यवस्था विभागमा दर्ता भएर निजी स्तरमा खुलेका ड्राइभिङ सेन्टरमा मात्रै तालिम लिन पाउने सुविधा छ । यसमा पनि मोटरसाइकल र हलुका सवारी साधन मात्रै सिक्न पाइन्छ । ‘व्यावसाहिक तालिम लिएर सिधै चालक बन्न पाउने व्यवस्था राज्यले गरेको छैन,’ ज्वालाले भने ।दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले सीटीईभीटीलाई जिम्मा दिएको छ । श्रम, रोजगार र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सीप विकास तालिम केन्द्र स्थापना गरिएको छ । दुवैमा यातायात क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने तालिम दिने गरिएको छैन । सवारी चालकका लागि तयार गरिएको पाठ्यक्रमसमेत उपयुक्त छैन । त्यसमा निश्चित मापदण्ड तोकिएको छैन । ‘भूगोलका आधारमा ड्राइभिङ स्कुल हुनुपर्थ्यो,’ ज्वालाले भने, ‘यहाँ मधेसमा गाडी कुदाइरहेका साथीहरूलाई पहाडमा पठाइन्छ । भूगोलका कारण दुर्घटना बढिरहेको छ ।’
जनशक्ति उत्पादनमा बेवास्ता
सरकारले ठूला सवारी साधानका लागि लाइसेन्ससमेत दिन रोकेको वर्षौं भइसक्यो । यसले गर्दा बजारको मागअनुसार जनशक्ति छैन । यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार ठूला सवारी चलाउने ड्राइभरले मासिक रूपमा ४५ देखि ५५ हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन् । यस्ता ड्राइभरहरू विदेश गए तेब्बरसम्म आम्दानी हुन्छ । कतारमा लरी ट्रक चलाउँदै आएका झापाका रेवती शर्माले मासिक ५ हजार रियाल –एक लाख ५० हजार रुपैयाँ) सम्म कमाउने गरेको बताए । ‘यहाँको सडक सुरक्षित छ । ट्राफिक प्रहरीसँग घुम्ती नै पिच्छे लड्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘नेपालमा महिनाको २० हजार पनि बचाउन गार्‍हो छ । यहाँ एक लाख रुपैयाँ चोखो बचाउन सकिन्छ ।’
कतारमा हलुका सवारी साधन चलाउने ड्राइभरले पनि १९ सय रियाल (५७ हजार रुपैयाँ) कमाउने गरेका छन् । ‘यहाँ लाइसेन्स पाउनु भनेको मास्टर डिग्री पाएजस्तै हो । निकै कठिन छ । लाइसेन्स पाइसकेपछि जिन्दगी नै सुरक्षित भएजस्तो लाग्छ,’ शर्माले भने, ‘नेपालमा हामी हेपिएका छौं । त्यही ड्राइभरले विदेशमा सानका साथ काम गर्न पाउँछ ।’
नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष गोकर्ण पराजुलीले पनि यातायात क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव रहेको बताए । ‘एक त हेभी सवारी साधनको लाइसेन्स दिन बन्द छ । यसको कारण सरकारले स्पष्ट भनेको छैन,’ नारायणी यातायात प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका पराजुलीले भने, ‘उमेर नाघेकाहरू काम गर्न नसक्ने भए । काम गर्न सक्नेहरूको हातमा लाइसेन्स छैन । लाइसेन्स भएका चालक पाउन मुस्किल छ ।’
उनका अनुसार यातायात क्षेत्रमा दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण नै सीपयुक्त जनशक्तिको अभाव हो । ‘लामो दूरीको सवारी साधन सञ्चालन गर्न एक जनाले मात्रै सम्भव छैन । पालो दिने चालक चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले लाइसेन्स बन्द गर्दा बजारमा नयाँ चालक नै भेटिँदैनन् ।’
सरकारले सवारी चालक नियमावली–२०७१ शंशोधन गरेर चालकका लागि कक्षा १० उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । सवारी चालकहरू यो नीति व्यावहारिक नभएको बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा सीधै हुनेखाने वर्ग आउने होइन । गाउँमा दुःखकष्ट बेहोरेका, पढ्न नपाएकाहरू आउँछन्,’ ज्वालाले भने, ‘सरकारले पढाइ हुनुपर्ने सर्त राखेर त्यस्ता वर्गको रोजगारीमा लात हान्यो ।’ प्रत्येक वर्ष गाडीको संख्या बढिरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चार लाख ३७ हजार सवारी साधान थपिए । गत वर्ष ६ लाख ५६ हजार ९० गाडी थपिए । गाडी हरेक वर्ष बढ्छ, दक्ष चालक भने घट्दै छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षणले यहाँ दक्ष जनशक्ति नै छैन,’ ज्वालाले भने ।
यो शरीरमा बल भएसम्म चल्ने जोखिमयुक्त पेसा हो । श्रम ऐन–२०७४ ले यातायात श्रमिकका लागि विशेष सुविधा दिएको छ । लामो दूरीमा यात्रु ओसारपसार गर्ने सवारी साधन आलोपालो गरी चलाउन कम्तीमा दुई जना चालक राख्नुपर्ने नियम छ । त्यस्ता चालकलाई गन्तव्य स्थानमा पुग्नुअघि ठाउँ–ठाउँमा आराम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दिनको आठ घण्टाभन्दा बढी समय काममा लगाइए श्रमिकलाई बढी समय काम गरेबापत निजले पाउने पारिश्रमिकको डेढीका दरले पारिश्रमिक दिने, गन्तव्य स्थानमा नपुग्दै सवारी साधन बिग्रिएर नचल्ने भए वा कुनै कारणले एकै स्थानमा रोकिराख्नुपरे श्रमिकलाई सवारी साधन चालु रहेको अवस्थामा पाउने गरेको भत्ताको पचास प्रतिशत भत्ता दिने नियम छ । सवारी साधनमा प्राथमिक उपचारका लागि स्वास्थ्योपचार सामग्री राख्नुपर्छ । तर, यी प्रावधान लागू गरिएका छैनन् ।
‘हामी त हिटलरको ग्यास चेम्बरभित्र यहुदीलाई हालेजस्तो हालतमा छौं । दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न जिम्मेवार निकायको ध्यान छैन । सबै दोष हामीलाई मात्रै लागेको छ । हामी कुन मानसिक तनावमा काम गरिरहेका हुन्छौं, अरूलाई थाहा छैन,’ ज्वालाले भने, ‘हाम्रो न्यूनतम तलबसमेत तोकिएको छैन । हामी ट्रिपका आधारमा पारिश्रमिक पाउने गरी काम गरिरहेका हुन्छौं ।’
यातायात श्रमिकका लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गरिएको छैन । नेपाल ट्रक व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष पराजुली यातायात व्यवसायी नै अस्थिर रहेकाले श्रमिकहरूका विषयमा व्यवस्थित हुन नसकेको बताउँछन् । ‘हरेक तीन महिनामा सवारी साधनका मालिक फेरिन्छन् । मालिक परिवर्तन भएलगत्तै कामदार पनि बदलिन्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले कम्पनीका रूपमा यसलाई सञ्चालन गर्‍यो । यस क्षेत्रलाई अनुशासनमा राख्न सकेन । यातायातमन्त्रीले यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई बिरालोले बच्चा सारेजसरी फेरिरहन्छन् । अनि कसरी व्यवस्थित हुन्छ त ?’
प्रकाशित : भाद्र १०, २०७६ १२:२४